Quotes: Cns24 - Kukadzi 20, 2020, 10:15:42 AM
Mhoroi, pane mutsauko wemakore gumi nematatu pakati pangu nemukadzi wangu uye isu tiri hama. Pandakaenda kubvunzurudzo yeviza, ndakanetseka chaizvo kuti vangave nedambudziko nenyaya yezera, asi vakandibvunza nezvebasa remukadzi wangu kwataisangana nemurume wangu kana kwete. Ramba wakadzikama panguva yekubvunzurudza, ipe mhinduro pfupi uye dzakajeka, kana iwe ukavhunduka, ivo vanobvunza mibvunzo yakawanda, ivo vanoda rumwe ruzivo rwakadzama.
Hapana kana chekutya pamusoro peusiyano hwezera. Aya ndiwo mamiriro ane zvido zvemunhu uye mumiriri anoongorora chinangwa chakasvitsa zera iro, kwete zera rezera. Ivo vanogona kunzwisisa kuti mimics, wanano yakagadzirwa kubva kumhinduro dzakapihwa ndeye chaiyo kana kuti ndeyenhema uye yakatendeka uye hapana chinhu chekunetseka nazvo mushure mekupa mhinduro dzakarurama.
Quote: leowoman - Kukadzi 20, 2020, 10:59:09 PM
Ndakaverenga zvinyorwa zvakanyanya zvekuti pakutanga ndakasangana nekunzwa uye nekunzwa, saka pakutanga ndakatya mamiriro akadaro.Ndakanga ndakanaka zvino.Ngatione kuti tichararama zvakadii.
Zvakatorwa: Aya90 - Kukadzi 20, 2020, 11:54:55 PM
Nzeve dzinonzwa uye nekuwedzeredza mazwi akazara namashoko zvekuti ivo vari kutenderera ...
iwe uchanzwisisa zvandinoreva kana iwe uchibvunzwa mune vhiza application.
Ini ndine makore gumi nemana ekusiyana nemukadzi wangu. Zera raingova chiratidzo, ndakanzwisisa izvi pandakasangana nemukadzi wangu. Kusvika panguva iyoyo, takaziva kuti isu taingotsvaga mumwe nemumwe kuti isu takazoroora 14 mwedzi mushure mekusangana.
VaMunyaradzi vanopokana nezera rekuona kana muchato pakati pako uri muchato chaiye.Ko sezvandakambotaura, amburenzi haafunge nezvezera repazera, asi chinangwa chiri pazera rezera.
Kana iwe ukavimba nehukama hwemumwe wako, hapana chikonzero chekutya.
Quote: leowoman - Kukadzi 21, 2020, 08:27:02 PM
Ndakaona saiti iyi zvakanaka chaizvo, ndakutevera, ndinonyatsonzwa runyararo pandinoona vanhu vakaita seni.Ndinoona kuti ndatora matanho akasimba.Ndinoshuva dai taive nemukana wekuziva pamberi peo. Ini ndinogara ndiri nani, ndiri nani zvakanyanya, ndiri zvikuru kwazvo pano, uye ndichatevera maitiro ese nekuagovana navo kana maitiro angu atanga.Ndino tarisa kuti iwe uchawana vhiza yako.
Ini ndinotarisira munhu wese kuboka rangu reFacebook, uko kwakakodzera, kwakajeka ruzivo kugoverana uye kuchinjanisa mazano nezve maitiro e-visa andinosangana nawo neni achaitwa.
Mhoroi munhu wese, nhasi zuva rangu rekuzvarwa makumi masere nemasere uye vakadana mudzimai wangu kubva kubazi rekune dzimwe nyika. Pane chero munhu anoziva nzira inotevera inoshanda?
Quotes: Cns24 - Kukadzi 28, 2020, 02:25:28 PM
Zvichida zvinotora vhiki nhatu kana kupfuura, mune mukadzi unogara muguta ripi?
Quot: MuratNadja - Kukadzi 28, 2020, 02:36:38 PM
Mukadzi wangu anogara muFrankfut gißen. Pane chero kugadzirisa mune yako mamiriro?
Quotes: Cns24 - Kukadzi 28, 2020, 02:40:15 PM
Musi wa44, mudzimai wangu akaenda akabvunza kana magwaro anga asvika kubazi rekune dzimwe nyika, vakati ivo vatambira magwaro, ingomirirai nhau kubva kwatiri.
Quot: MuratNadja - Kukadzi 28, 2020, 02:43:44 PM
Ini ndinofunga iyo yakanyanya kuomesa maitiro ebasa kumirira pasina nhau. InsAllah, inowana visa yako yekubvumidzwa.
Quotes: Cns24 - Kukadzi 28, 2020, 02:58:52 PM
Hongu, zvinosuruvarisa, ndinoshivirira, asi zvino ndaremerwa. Mira, kumirira, tione.